Dalabkii Emilie Ratelband ee ahaa in 20 sano laga jaro da’diisa ayaa maxkamada diiday… – Hagaag.com
Dalabkii Emilie Ratelband ee ahaa in 20 sano laga jaro da’diisa ayaa maxkamada diiday…
Posted on 4 Diseembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Emilie Ratelband oo horay uga soo muuqday warbaahinta islamarkaana dagaalka kula jiray dadiisa ayaa loo diiday codsigiisii ahaa in uu 20-sano laga jaro dadiisa oo ah 69, balse uu doonayo in loo diiwaangeliyo 49-sano.
Maxkamadda ayaanan ku raacin Emilie Ratelband sheegashadiisa ah in da`du dhibaato ku hayso, islamarkaana ay waxyaabo badan oo xagga nolosha ah ay ka hortaagan tahay.
Waxa ay sheegtay maxkamadda in da`da qofka ay waxyaabo badan kaga xiran tahay dhanka nidaamka dowliga ah islamarkaana hadii wax laga badalo ay isku dhex yaacayaan nidaamyadaasi.
“- Emilie waxa uu xor u yahay in uu u dhaqmo ama dareemo in uu nin da`yar yahay, balse diiwanka dowladda waxaa ugu yaalaya tan saxda ah”, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah qoraal ay soo saartay maxkamadda.
Emilie Ratelband oo ah 69 jir u dhashay dalka Holland ayaa maxkamad la fuulaya da`diisa taas oo uu sheegay in uusan ku qanacsaneyn islamarkaana ay wax badan ka hor taagan tahay.
Ninkan oo dhashay sannadkii 1949-kii ayaa sheegay in dadiisu ay ka hor taagan tahay in uu helo shaqo, naag saaxiib iyo in uu guri gato, waxaana uu intaasi raaciyay in waxaasoo dhan meesha ka baxayaan haddii loo diiwaan geliyo da da cusub ee uu doonayo taas oo ah 49 jir.
” 69 jir ahaan, waxaan ahay nin xadidan oo dadu wax badan ka hor taagan tahay, laakiin haddii 20 sano la iga jaro oo la ii diiwaangeliyo in aan dhashay 1969-ka wax badan ayaa nolosheyda iska badaleysa”, ayuu yiri ninkan dagaalka kula jira da diisa.
Waxa uu sheegay in dhakhtarkiisu u sheegay in uu leeyahay jirka nin 45-sano jir oo kale, isagoona isu aaminsan in uu yahay nin “da`yar”.
Si kastaba, arintan ayuu ku tilmaamay xuquuq la mid ah tan la siiyay dadka raba in ay badalaan abuurkooda Alle ee doonaya in ay dumar noqdaan ama rag.